Ụgbọ elu ụgbọ elu India nke dị ọnụ ala dị ala nwere ike bụrụ ihe ọma maka Boeing
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu ụgbọ elu India nke dị ọnụ ala dị ala nwere ike bụrụ ihe ọma maka Boeing
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • India na -agbasa ozi ọma • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Mwepụta ọhụrụ nwere ike ịbụ otu n'ime nnukwu nkwekọrịta n'afọ na -abụghị United States iji zụta ma ọ bụ gbazite ụgbọ elu Boeing 737.
Boeing na -ahụ ohere iji meziwanye ọnọdụ ya na India.
Billionaire India na-ekwupụta ụgbọelu ọhụrụ dị ọnụ ala.
Ọhụụ ọhụrụ na -aga n'ihu,
Onye na -eme ụgbọ elu US Boeing nwere ike nweta ohere iji nwetaghachi ala furu efu na India na onye ijeri ego Rakesh Jhunjhunwala na-ekwupụta atụmatụ ịmalite ụgbọ elu ụgbọ elu India dị ọnụ ala.
Ọnọdụ ahịa Boeing nke India merụrụ ahụ n'ihi ọdịda nke otu nnukwu ndị ahịa ya, Jet Airways, afọ abụọ gara aga.
Jhunjhunwala, nke a maara dị ka "Warren Buffett nke India" maka itinye ego ya na ngwaahịa na -aga nke ọma, na -ezube isonyere ndị isi oche mbụ nke IndiGo, onye na -ebu ụgbọ ala kachasị ukwuu na Jet Airways iji nweta arịrịọ maka njem ụgbọ elu ụlọ.
Ọ bụ ezie na atụmatụ Ahun Air nke Jhunjhunwala na-abịa na-abịa mgbe ụlọ ọrụ ụgbọ elu India na-enwe nsogbu nke ọrịa COVID, nke hụla ka ụgbọ elu na-efufu ijeri dollar, atụmanya ogologo oge nke ngalaba na-eme ka ọ bụrụ ahịa na-ekpo ọkụ maka ndị na-eme ụgbọ elu Boeing na Airbus.
Otu isi ụlọ ọrụ kwuru na atụmatụ ọhụrụ a amalitelarị ị nweta ihe nwere ike bụrụ nnukwu nkwekọrịta n'afọ na mpụga United States iji nweta ma ọ bụ gbazite 737.
Maka Boeing, nke a bụ nnukwu ohere ịbanye na egwuregwu ha, na -eche na ha enweghị onye isi ọrụ ọ bụla maka ụgbọ elu 737 dị na India ewezuga SpiceJet.
Boeing ekwughị maka atụmatụ Akasa mana o kwuru na ọ na -achọ ohere mgbe niile ma na -agwa ndị ahịa ugbu a na ndị nwere ike okwu gbasara otu ọ ga -esi kwado ụgbọ mmiri ha na mkpa ha.
Jhunjhunwala, onye na-atụle itinye ego $ 35m ma ọ ga-enwe pasent 40 nke onye na-ebu ya, na-atụ anya inweta asambodo mgbochi site na ministri ụgbọ elu India n'ime ụbọchị iri na ise sochirinụ, o kwuru. Ndị otu ụgbọ elu dị ọnụ ala na-eleba anya n'iwu ụgbọ elu nke ndị njem 15 70 n'ime afọ anọ, o kwuru.
Ndị ọzọ rụpụtara Akasa bụ Aditya Ghosh, onye ya na IndiGo nọrọ afọ iri ma bụrụ onye amaara maka ihe ịga nke ọma mbụ ya, yana Vinay Dube, onye bụbu onye isi Jet onye ya na Delta rụkwara ọrụ.
Ndị na-ebu ụgbọ ala dị ọnụ ala (LCC) gụnyere IndiGo, SpiceJet, GoFirst na AirAsia India, ọtụtụ n'ime ha na-arụ ụgbọ elu ụgbọ elu dị warara.
Boeing na-achịkwa ahịa ụgbọ elu India nke ụgbọ elu 51 mana agha agha na ọnụ ahịa dị elu ebutela ọnwụ n'etiti ndị na-ebu ọrụ zuru oke, gụnyere Kingfisher ụgbọ elu na 2012 na Jet Airways na 2019, na-eme LCC na Airbus ọbụna karịa.
Akụkụ Boeing nke ụgbọ elu 570 dị warara nke India dara na 18 pasent mgbe Jet nwụsịrị site na 35 pasent na 2018, data sitere na ndụmọdụ CAPA India na-egosi. A napụtara Jet n'oge na -adịbeghị anya site na enweghị ego, a na -atụkwa anya ife ọzọ.
Ndị na -ebu ụgbọ elu India nwere ihe karịrị ụgbọ elu 900 n'usoro, nke 185 bụ Boeing 737 na 710 bụ Airbus, nke gụrụ IndiGo dịka otu n'ime ndị ahịa ya kacha n'ụwa niile.